Tokony Hitondra Ny Zanany Any Amin’ny Fihetsiketsehana Ve Ireo Ray Aman-dreny Manohitra Ny Nokleary Ao Taiwan? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2014 4:45 GMT
Zazakely matory nandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny nokleary tamin'ny 27 Aprily 2014. Hoy ny vakin'ny sora-baventy mavomavo: “Ajanony ny toby nokleary faha-efatra ary avereno amin'ny vahoaka ny zony”. Sary avy amin'ny mpisera Instagram vincentkensei. CC BY-NC 2.0
Raha nampiasa tafondron-drano mahery vaika ny polisy Taïwaney mba handroahana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny nokleary tamin'ny 28 Aprily tamin'ny 3 ora, anisany tao anatin'ireo vahoaka ny kilonga.
Nitondra ireo zananilahy sy zananivavy tao amin'ny fihetsiketsehana ireo mpanao fihetsiketsehana sasany, izay nitangorona nanohitra ny fananganana toby nokleary fahaefatra ao amin'ny nosy.
Mpanao fanadihadiana maromaro an-gazety nitsikera ireo ray aman-dreny nitondra ny zanany tamin'ny fihetsiketsehana ho tsy misaina fa mampidi-doza ny fiainan-janak'izy ireo.
Saingy niaro-tena ireo ray aman-dreny nanao fihetsiketsehana ary nilaza fa ny polisy no tokony omena tsiny satria mba te ho henoina ihany koa ny zanak'izy ireo:
Tamin'ny 3 maraina ny polisy no nanomboka nandroaka ireo mpanao fihetsiketsehana, ary maro ireo mpanao fihetsiketsehana nijoro teo anoloanay tahaka ny rindrina ary niezaka nanakana azy ireo. Nanohy nitabataba izy ireo nilaza fa nisy ankizy natory tao anaty tranolay. Nisisika tamin'ny fampiasana tafondron-drano ny lehiben'ny polisy mba handroahana ireo mpanao fihetsiketsehana ary tsy mba nandefa polisy manamboninahitra akory mba hanao fifampiraharahana hanala ireo ankizy ao anaty fihetsiketsehana. Raha nanatona amin'ny ampinga sy kibay ny polisy ary niroso ny tafondron-drano, dia nitebiteby fatratra ireo mpanao fihetsiketsehana teo anoloana. Niforona ho ampinga izy ireo ary nanampy anay niampita ho eny amin'ny sisin-dalana ao ZhongXiao West Road. Nahita izahay fa narodan'ny polisy ny tobinay ary natsipin'izy ireo teo amin'ny lalan-kafa alohan'ny hanamarinany raha mbola misy olona ao anatiny.
Raha nipetraka tao ZhongXiao West Road izahay, hoy ny kilongay iray enin-taona tamiko: «Mino aho fa miaraka amin'ireo polisy manamboninahitra ireo ny governemanta, mba handre ny feontsika sy hahafantatra izay tadiavintsika sy ny tsy tadiavintsika”. Toy ny faniriana feno fanetre-tena tokoa izany. Mino izy fa mety ho ao ny governemanta. Ny tiako hambara dia, tsy tokony hitsangana aorian'ny polisy ny governemanta. Fa tokony ho eo alohan'izy ireo mba handre ny teny avy amin'ireo ankizy ireo.
Maro tamin'ireo ray aman-dreny nitondra ny zanany tao amin'ny fihetsiketsehana no mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Ray Aman-dreny Mandray Anjara Amin'ny Fanabeazana. Shih-Che Lo, mpikambana ao amin'ity fikambanana ity nanazava [zh] ny antony mahatonga ny fikambanana manohana ireo ray aman-dreny te-hamonjy ny fihetsiketsehana miaraka amin'ny zanany:
Renim-pianakaviana nanao fihetsiketsehana nitondra ny zanany niala tamin'ny polisy sy ny tafondron-drano. Sary avy amin'ilay mpisera Twitter siegfy ary naverin'ny gjtaiwan nalefa sioka indray (retweet). CC BY-NC 2.0
Nilaza ireo tsikera fa tsy tokony nanohana ireo ray aman-dreny nitondra ny zanany tao amin'ny fihetsiketsehana ny fikambananay, araka ny fomba eritreretin'izy ireo mikasika izany hoe manao ahoana ny ankizy. Zavatra roa no heverin'izy ireo: (1) marefo ny ankizy (mila arovana), ary (2) tsy manana na voafetra ny fahaizan'ny ankizy mandinika mba hahatakarany ny misy eo amin'ny tontolo.
Raha mino isika fa ny zanaka no hoavintsika, miseho ny fahatakarana an-tsaina isan-karazany mikasika izany: (1) marefo ireo ankizy ireo, saingy hianatra ho matanjaka sy hanana hery hiaretana, ary (2), na dia mbola tsy ampy tsara aza ny fahaizan'izy ireo mandinika, afaka manomboka mianatra ny fomba fandinihana sy hanao izany ho fahazarana izy ireo.
Niadi-hevitra mikasika ity tranga ity ihany koa i Ninjiatext, bilaogera miresaka manokana momba ny fitsipi-pitondratena:
Mety mihevitra ny ankamaroan'ny ray aman-dreny fa sarotra ny miaro ireo ankizy ao anatin'ny fifandonana, ka tsy mitondra ny zanany amina fihetsiketsehana izy ireo.
Na dia izany aza, manavaka ny olona sasany ity karazana fitsarana momba ny fitsipi-pitondratena manokana ity [mba ho afaka hamonjy fihetsiketsehana], ohatra, ireo olona antitra sy sembana. Tsy tokony hamonjy fihetsiketsehana ve ireo izay tsy afaka miaro ny tenany manokana? Tsy tokony ho afaka hankeny aloha ve ireo mandeha amin'ny seza atosika sy manana fahasembanana? Mety manaisotra azy ireo amin'ny zony fototra maha-olona azy izany karazana fihevitra izany.
Niaraka tamina ankizy sasantsasany i E Ting Ying vao maraimbe, ary namariparitra ny fomba fiatrehan'ny ankizy ny fandroahana:
Mpanao fihetsiketsehana nibodo ny lalàna ZhongXiao West Road. Sary avy amin'ilay mpisera Instagram, deception. CC BY-NC 2.0
Mino aho fa tsy nahazo aina sady natahotra ireo ankizy tao, tahaka ireo olon-dehibe ihany. Ny zava-dehibe dia izany indrindra no tian'ny governemanta sy ny polisy hahazo antsika.
Na dia izany aza, tsy dia marefo sy tsy mahalala na inona na inona araka ny fiheveran'ireo olon-dehibe ny ankizy .
Lehibe tamina tontolo feno fitiavana sy fanajana ireo ankizy ireo. Tonga tao amin'ny fihetsiketsehana izy ireo satria fantany izay zava-mitranga. Raha fantany ny antony ahatongavany ao, hanana hery hiatrehana ny tahony izy ireo.
Namariparitra izay tao anatin'ny sainy ihany koa i Wei-Han Huang, mpanoratra gazety tao amin'ny fihetsiketsehana raha nahita ireo ray aman-dreny niaraka tamin'ny zanany:
Fantatro, azoko, ary manaiky aho fa tsy tokony havela eny amin'ny toerana na tranga mety hampidi-doza ny ankizy. Na dia izany aza, mba noheverinao ve fa tsy hampidi-doza ireo ankizy ao Taiwan ihany koa ny fametrahana toby nokleary?